Kuthetha ukuthini ukuphupha uncancisa? Fumanisa kwi-Intanethi ▷ ➡️
Kuthetha ukuthini ukuphupha uncancisa?
1 Ukuphupha ukuba uncancisa
2 Kuthetha ukuthini ukuphupha uncelisa?
3 Ukuphupha ukuba uncancisa umntwana
4 Ukuphupha ukuba uncancisa umntwana
5 Jonga umntu ancancisa
6 Iphupha malunga nebhinqa elincancisa umntwana wakho
7 Ukhe waphupha umntu encanciswa
9 Ngaba ukuncancisa luphawu oluvela kuThixo?
Ukuphupha ukuba uncancisa
Ukuphupha uncancisa okanye ubona umntu ancancisa kubalulekile ukuba unikela ingqalelo kwezinye iimeko eziza kwenzeka. Olu luphawu lokuba uvuyo luya kufumaneka kuphela ukuba unoxolo lokuqhubeka.
Kubalulekile ukuba uqaphele ukuba intsingiselo yephupha olincancisayo liya kuxhomekeka kwimeko apho iphupha lenzeka khona. Kuboniswa ukuba imalunga nokuchonga okwenzekayo kwaye emva koko ubone ukuba yeyiphi imeko ongena kuyo. Olu papasho luza kukunceda kwaye namhlanje uyazi ukuba yintoni ebonisa olu hlobo lwamaphupha.
Kuthetha ukuthini ukuphupha uncelisa?
Ngokwesiqhelo luhlobo lwamaphupha ahlala enabafazi kuphela kwaye intsingiselo iya kudibana nokuba ngumama. Nangona ayisoloko ibonisa ukuba kwaye kunokuba ngaphezulu kunokuba ucinga.
Olu hlobo lwamaphupha luza kakuhle ngokunxulumene nokufumana uthando ngakumbi, uthando kunye nemfuno yokuncitshiswa. Isenzo sokuncancisa singaphezulu kokulambisa umntwana, yinto enkulu kakhulu.
Ukuphupha ukuba uncancisa umntwana
Ukuba ungumfazi, luphawu olucacileyo lokuba kufuneka ukhathalele impilo yakho. Fumana ugqirha kwaye ulumke ngakumbi ngesifuba sakho, ufumane ukuhlolwa. Ingcebiso ebalulekileyo kukugcina iimviwo zakho zisemgangathweni kwaye uhlala unxibelelana nogqirha othembekileyo.
Kukho isibonakaliso sokuba isifuba sakho sinokufuna ukhathalelo oluncinci, kodwa akukho nto ibhekisele koku. Olu hlobo lwamaphupha sisihombo esidinga ukuhoywa ngakumbi malunga noku.
Ukuba uphupha ukuba uncancisa umntwana kubalulekile ukuba uzilungiselele, kuba inokuba zizinto ezininzi. Ukuba umntwana mhle kakhulu kwaye usempilweni, luphawu lokuba umntu osondeleyo kuwe uya kuba ngumama. Ukuba yenye indlela ejikelezileyo, luphawu lokuba ezinye iingxaki ziya kwenzeka kwaye ukugcina ukholo kuThixo kuya kuba yimfuneko.
Ukuba umntwana uyaziwa, kubaluleke kakhulu ukuba ukulungele ukuhoya ngakumbi kuba umntwana uya kukudinga. Kuya kuba lixesha apho kuya kufuneka uzimisele ukunceda lo mncinci ukuba anqobe ingxaki.
Jonga umntu ancancisa
Kubonisa ngokucacileyo ukuba umntu unokufumana iingxaki ezinzulu ebomini babo. Into elungileyo onokuyenza kukuthathela ingqalelo kwaye uhlalutye okungalunganga kubomi bakho bemihla ngemihla. Ukuba kukho ezinye ezinxaxhileyo ingalixesha lokuzixolela kwaye ufunde ukuba awuzukuhlala ulungile.
Zama ukuqonda ukuba iziphene zikhona emntwini wakho, kwaye usenokungafuni ukuhlala ulungile. Ixesha licela ukuba ube nokuqonda okungakumbi ngobomi bakho.
Iphupha malunga nebhinqa elincancisa umntwana wakho
Ukungazithembi yinxalenye yobuntu kwaye ukuba uziva ngolu hlobo luphawu olucacileyo lokuba ufuna ingqwalaselo engaphezulu. Amaphupha okuncancisa abonisa imeko yokungabikho kokhuseleko kunye nothando. Yiyo loo nto kubalulekile ukuba ufikelele kusapho kunye nabahlobo bakho kwaye ubabonise ukuba ufuna i-caress.
Ihlabathi Iimfuno zala maxesha ezibandayo kunye nokhuphiswano oluninzi, wonke umntu umiselwe ukuba abe yeyona nto ibalaseleyo. Kuqhelekile ukulibala eyona nto ibalulekileyo, ubuzalwana, uthando kunye nokunyaniseka.
Ukhe waphupha umntu encanciswa
Olu hlobo lwamaphupha lubonisa ukuba uyakubonwa ebomini bakho nakusapho lwakho. Ingcebiso kukuba ulisebenzise eli thuba "izinyo kunye nesikhonkwane", zama ukuvela kwaye uvune umvuzo. Kulumkele ukukhuphisana kakhulu, kuba oku kungabonisa ukuba ufuna ukutsala umdla kwaye oku kubangela umona emsebenzini.
Ukuphupha uncelisa okanye ubona umntu ancancisa into ecacileyo yokuba ngubani oza kwenza into elungileyo. Kuhleli kuwe kuphela ukuba ugcine ukholo lwakho kuThixo kwaye ke ufumane iziphumo ezichanekileyo.
Ukuba uphuphe umntu ekuncancisa, luphawu olucacileyo lwemfuno kwaye oku kuya kufuna ingqalelo ethe kratya. Kubalulekile ukusondela ebantwini abakuthandayo kwaye ungazihluli njengokuba usenza. Abantu bayakuthanda kwaye bayakukhumbula, kodwa kufuneka ubabonise indlela ababaluleke ngayo.
Khangela abo bantu kwaye uvule intliziyo yakho, wonwabele obu bomi ukwenza umahluko kubomi babantu bonke. Ungalibali ukubavumela ukuba banike uhambo lwakho ngakumbi intsingiselo.
Ngaba ukuncancisa luphawu oluvela kuThixo?
UThixo uyakwazi ukuthetha ngemiqondiso kwaye olu hlobo lwamaphupha lubonisa ukuba ungazilungiselela iindaba ezilungileyo. Kubalulekile ukufunda ukutolika le miqondiso kumandla apho ithuba linokubanjwa khona. Ukuphupha ukuba uncancisa yenye yeendlela zokulungiselela okuhle okuzayo.
Kuthetha ukuthini ukuphupha imoto emhlophe?
Kuthetha ukuthini ukuphupha abantu abafileyo?